Ukushaywa Single nge ukuhlala ubusuku: izici ezokuvakasha
Ezemidlalo Ukufaneleka, Outdoor Sports
"I imifula nezimpophoma, izimfunda namachibi, amagquma nasemifantwini yamadwala, izintaba, amahlathi nezihlahla lasendulo - konke enhle Ziyakwazi eziwusizo kakhulu, futhi akukho zamadola noma amasenti akufanele kubo ... Ziinsiza abantu abangaphezu kuka izikole zemfundo ephakeme, abashumayeli, noma iyiphi. uhlelo lwezemfundo yesimanje "- njengoba Genri Devid Toro, umbhali American kwekhulu le-19, wachaza ukubaluleka imvelo ekuphileni kobuntu.
Kungani abantu bekhetha amatende wedwa?
Yini eyenza abantu ekuphikeni eziphucuzekile izinzuzo ukucwiliswa esifubeni Mother Earth, okuholela isifiso nokuguqulwa ukuba yedwa nemvelo, ukuze abe yingxenye esidabukisayo into ngokuphelele omkhulu, okungenamkhawulo lokho? Mhlawumbe isifiso eziphonsa ezweni eliluhlaza, uzizwa ubunye noMdali, ukuthola izimpendulo zemibuzo eminingi. Lokhu kuzosiza kuphela umkhankaso olulodwa, lapho le nkampani ngeke ezicezile ukucatshangelwa ulwazi ezungeze ubuhle, ulwazi ngokwalo.
nobunzima ngokwengqondo umkhankaso olulodwa
Ngesikhathi sokuqala uma kuyoba isizungu ikakhulukazi sibi, kunjengoba ecasulayo ikhanda ngeke acindezele ingqondo yakho, uyasikrufulula ngaphakathi ngaphandle ngawakhamela ekukhathaleni ezingokwengqondo, ngeke ukuphazamisa ukubaniza ngokuzumayo izinkumbulo zesikhathi esidlulileko. Lokhu kuzoqhubeka isikhathi eside akazange ashade, kodwa uzobe esiyingqopha-mlando ukuphila.
Ngokushesha imicabango yakho elikhulu futhi fast zonke stop okungazelelwe, uma kabusha vula amehlo akho, uzobona ukuthi kuleli zwe alikho ayikho into enjalo njengoba isizungu, konke emhlabeni ligcwele umuzwa emnandi. Isibhakabhaka kuyoba umngane wakho, yonke imithi uyokhuluma ngolimi uqonde, wenza kanjalo uyokuqonda okushiwo icula ukujula, bonke bagcwala imibala ayegcwele, futhi okubaluleke - ingqondo yakho uzothola kalula futhi umphefumulo - ukuthula.
Obunye ubunzima a indlela enjalo
Lona ebaluleke kakhulu phasi ubudisi obunengi ngokwengqondo ukuthi kufanele unqobe, wonke umuntu ubhekene ke, onquma ukuya yonke indlela yedwa. Eqinisweni, eziningi kubo:
ukwenqaba evamile induduzo may kwabanye kubonakala kunalokho nzima;
Ukwesaba-non-inzalo, izinambuzane, ukushisa;
ukungakwazi uzulazule sezwe;
zokungazi imithetho esiyisisekelo sokuziphatha emahlathini, ezintabeni, phezu kwamanzi.
Kunzima kakhulu ukunikeza iseluleko ewusizo sendlela hhayi ukuba bangazikhathazi ngezinto ezinjalo, bonke ngamunye kakhulu, ngamunye izinhlelo zabo, ukuba umuntu amane nje khumbula ukuthi kungaba njalo ukuqeda, uma wenza kanjalo, yebo, bafuna.
izithiyo kwenqondo nangokwengqondo - it is kuphela kuyigxathu ekufezeni umgomo wakho, kuba yinkinga sokulungiselela kusengaphambili, engesiyo emayelana nesimo sakho somzimba. Umzimba wakho - iyona ndlela okuyiyona lapho ulwazi kwezwe elisizungezile. kuwufanele yayo nje ukulungiselela. Okokuqala, kudingeka sithole ukuthi singakanani isikhathi bazimisele ukuba banikezele umkhankaso, kusukela kule kuyacaca kangakanani nalokho imishini, banakekelwa uyongithatha nawe. Isisindo ubhaka kakhulu inquma nobunzima yomkhankaso.
Uma lokhu bonke kuyokhanya, udinga ukuqala ukulungiselela. Sebenza nge isisindo ukuthi kufanele baphathe. Ungaya ejimini, kodwa ungakwazi nje ulayishe ubhaka yakho futhi ezinsukwini ezimbalwa kanzima ukuba baphathe bayifaka emahlombe abo. Ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe evamile izakhiwo elifudumele-up, by okuzokwenza sekuqala ukufudumala, kuqinisa imisipha futhi kukhulisa lizinga ithoni evamile. Umsebenzi ezinhle gaphambi imisipha lumbar, njengoba isisindo ubhaka ingxenye enkulu kuyadingeka ngemuva aphansi namahlombe. Ukulungisa imilenze umthwalo ngokweqile ngeke akhulume nalowo muntu athi ukuhambahamba ngishaywe umoya nojosaka ukulayishwa noma cha, kanye umzimba ngendophi.
Umzila - iphuzu elibaluleke kakhulu
Lapho ihlela ukuba kube nomkhankaso owodwa, udinga ukwakha umzila kusengaphambili. Kungcono ukucacisa cishe ukephi ekupheleni iphuzu uya khona, ukuze babe namathuba amaningana ukuba bakhethe indlela engcono. Qiniseka ukukwazisa indawo eseduze of umzila wakho.
Itende nokulala isikhwama
Ngemva kokukhetha uhambo, ungaqala ukuqoqa ubhaka. Uma uhambo obubodwa, kwanele ubhaka ezincane (40-50 amalitha). imishini Standard isethelwe ukushaywa nge ukuhlala ubusuku kuhlanganisa:
Itende - kukhona izinhlobo ezahlukene ngokuphelele, kungcono ukuthatha olulodwa (isisindo ngaphansi), zihlukaniswe ngezigaba: eziphakeme, Mid, baye emathafeni. amatende Alpine zinezikhathi okusezingeni eliphezulu emoyeni ukumelana, Uhlaka kwagcizelela nesisindo eside. Mid etendeni - uyinto phakathi kwetende sezintaba ethafeni lokusisiza ukuba sibe nokuma Isisindo esivamile, enokumelana okuhle imvula nomoya. Amatende ethafeni tolerate izimvula kanye nomswakama high, indinganiso izivakashi ematendeni, kukho olukhulu uma uhlela uhambo olulodwa ehlathini ngobusuku obubodwa. Ukufaka ekamu ebusuku kwenziwa endaweni eyomile, uvikelekile ezintweni umoya esiphezulu. Ukuhoxa etendeni isethelwe uhlangothi ipheshulwa umoya.
Sleeping isikhwama - I-sonyaka ngamunye okufanele ezikhwameni zabo ingalali. Kukhona okuhlukile kakhulu. Inani kusho izinga, akukuhle ukulondoloza, ezibizayo futhi ngokunethezeka isikhwama ekulaleni futhi ivikela kangcono. Into esemqoka - ukukhetha ubukhulu kwesokudla.
Karemat - a mat amatende, lapho ungakwazi ukulala khona etendeni noma buyela ke ngaphansi esikhwameni ingalali. Liqinisekisa ezishisayo futhi umswakama isithiyo. Izinhlobonhlobo athandwa kakhulu - "Izhevsk". Izindleko, karemat eside waphila, efanelekayo cishe kunoma iyiphi uhambo.
Umkhankaso olulodwa kungaba kwenziwe ngaphandle koxhumano ukuhlala ubusuku, futhi ngaphandle itende nge esikhwameni ilele, kufakwe endaweni yawo nge-hammock. Ungenza ngisho ngaphandle hammock, kodwa kulokhu kuyinto efiselekayo ukulithatha itende emvuleni.
Okunye imishini Kuzonyuka wodwa kanjani
Uma sinalo kokuhlala isikhathi eside ekhaya, uzodinga ngisho imishini ezinye:
Ibalazwe lendawo - kuyadingeka ukuze umhlaba Ukuqondiswa kwemikhumbi, indawo amadamu nokuzimisela wokukhulekela izindawo eziphakeme.
Compass - ngaphandle kuzobiza kungekho ukushaywa olulodwa emahlathini, ezintabeni noma ikuphi.
Negesi sikaphalafini - umthwalo isisindo esengeziwe, kodwa ukushaywa lula kakhulu. Ezintabeni, izimvula - into njalo, nophethiloli ezinomswakama umlilo kuba engenamsebenzi ngoba iphele ukhuni kuzothatha isikhathi esithile, sikaphalafini ayokhonza njengamakhosi njalo esikhundleni nokudayisa ukudla okungabizi. Ungakwazi ukuthatha utshwala ezomile, ngawo ungakwazi ukufeza omiswe kwezinkuni. olufanele Ikakhulukazi lezi zinto uma uhlela uhambo olulodwa ezintabeni.
Knife - ungasebenzisa noma yikuphi eqinile futhi abukhali.
Rope - ewusizo kunoma isiphi isimo, kusukela okuhlanganisa pass ukuyisebenzisa njenge tourniquet.
Bowler - emkhankasweni olulodwa (ehlathini, entabeni, ichibi - akunandaba) kungcono ukuthatha amandla amancane (kufika ku ilitha), futhi uvumelane ekhishini izimbiza kakhulu, kodwa kungcono ukuthola aluminium izivakashi Bowler.
Umentshisi, Flint - konke kungase kudingeke ukuba komlilo. Lezi zinto kufanele behlukene umswakama, kuyindlela enhle Uyobe efaka nabo ikhondomu njalo. By the way, kuyize thatha ketshezi ukuze kuvuswe, ayikuboni isisindo ezisemqoka ubhaka, ngokushesha uphelelwa, awuzibhebhezeli yokufuna elivuthayo umlilo nakho ezimweni ezimbi kakhulu.
Njengoba ukushaywa olulodwa ehlathini noma ezinye endaweni esekusithekeni kuhilela ngabodwa yakho emphakathini isikhashana, lubalulekile kakhulu umbuzo okuhlala unempilo enhle. Ikhwalithi ukuphuza kudlala amanzi ezinsukwini zokugcina kodwa hhayi indima. Kukhona indlela yamanzi zokuhlambuluka kusuka cishe kunoma degree zalesi sithako. Ngo izivakashi ezitolo ezithengisa izibhebhe ngesisekelo iodine ukuthi ukubamba isitsha woketshezi, ngokusebenzisa iphakethe wathi ngesikhathi (imizuzu engu-15 kuya ku-30), amanzi iphathwa futhi iba isilungele ukusetshenziswa. Kungenzeka futhi ukuba ikhiphe iodine ezivamile: 4 amaconsi ukulungiselela ngamunye 1 litre amanzi, ulinde amaminithi 10 kuya ku-20.
Ngaphambi amanzi nihlanze kusuka amagciwane ayingozi, kufanele elicwengekileyo ngokusebenzisa ngendwangu noma isihlabathi ukuze ukusula ukungcola enkulu nezinhlayiya. Ngemuva kwesicelo emanzini kumele kubiliswe ngempela amaphilisi.
Kubalulekile ukucabanga ngalokho ezigqokisa ukuthatha emgaqweni, ikakhulukazi abangabodwa amanzi izinkambo, njengoba izingubo ezimanzi kalula, kodwa ome akulula ngaso sonke isikhathi. Izingubo kufanele kube lula, elula, umswakama oxosha, okusheshayo-omiswe. Awukwazi ukuya nokuhamba izingubo ukotini (jeans). izingubo ezimanzi ukuze ome kangcono ngokwa noma njengoba umlilo, kodwa ukuyipha ngokuqondile konke ukunakwa. Uma uhlela uhambo olude, ukuletha raincoat.
Sekuyisikhathi eside kwaziwa ukuthi izinyawo ezimanzi - lokhu ikhona yini imbangela eyinhloko imikhuhlane. Ngakho-ke, kumelwe sikhethe ngokucophelela umbhangqwana eziyisisekelo futhi esikhiphekayo izicathulo. izicathulo esikhiphekayo singaba usizo kabi njengoba uhamba phakathi kwekamu, ngokuvamile eshaya ngoCetshwayo. Enye izicathulo esikhiphekayo kuyoba owusizo uma kumanzi base pair.
Phatha kahle kukhethwa Trekking izicathulo, akumelwe aphanjaniswe no-ukugibela izintaba ebhuthini, enye ukunyukela eside ezindaweni sezintaba, kodwa ingaphansi ezanele yokuwela yabahamba ngezinyawo yonkana plain. Yiqiniso, ungenza ngaphandle izicathulo ezikhethekile, inqobo nje kwaba elula kunazo futhi iyathandeka nge umlenze anda.
Futhi, ukuletha ngazimbili ambalwa amasokisi, kuyinto efiselekayo ukuzishintsha nsuku zonke.
Ungakhohlwa kit zokuqala zosizo
zosizo lokuqala kufanele agcinwe endaweni kalula, kubalulekile ukuba bahlukanise kwawo izingxenye ezimbili: eziyisisekelo futhi eziphuthumayo.
Isifinyezo iqukethe anti-inflammatory, elwa namagciwane, Burns, ukukhwehlela nomzimba zemithi ethengiswayo, futhi analgesics, amabhandishi ...
Ngenxa yokwethuka - ke imithi yokubulala izinzwa, antiseptics, nitroglycerin.
Uma uya endleleni izintaba, qiniseka ukuthatha patch kanye gel kusuka ngilulekela ezintabeni - ophuma engamamitha ukugula, emkhankasweni Lake (River) ukukhwehlela imithi Ukugunda.
Trifle, kodwa nice ...
Trekking noma abavamile palka- umngane Irreplaceable ukuhambahamba ngishaywe umoya ukuhwebelana ubhaka ihambisa umthwalo phezu kwayo yonke indikimba, ekunciphiseni ukuba enhlanganisweni yebhantshi lensimbi, umlenze wehlise back. Kuyaphawuleka konga amandla, imali echithwa usekelo ibhalansi. Ngakho hamba nayo uma uya ukushaywa olulodwa.
Ukunyukwa kuthatha kakhulu okune-calorie nge isisindo okungenani. Uma unquma ukuthatha ukudla okusemathinini, musa ubuvila ukuthatha semolina kancane, emva okusemathinini ukuphuza uthele emathinini semolina, amahora ambalwa ngeke sikhukhumale emangalisayo, okumnandi nokunomsoco isinkwa putty. Ngokuvamile, ukupheka phezu komlilo kungcono ukuthatha ezihlukahlukene okusheshayo okusanhlamvu ukudla, okwaziyo futhi noodle ezomile. Kuyoba owusizo: Inyama belashwa nenhlanzi, amakhowe omisiwe, amantongomane, amagilebhisi omisiwe - umsoco, ukukhanya, ukudla eside egcinwe angadingi ukupheka.
Ukuya emkhankasweni olulodwa nge ukuhlala ubusuku, khumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi ingxenye imvelo ezungeze. Njengoba banquma ukuthuthela kude evamile, ukwenza ukuphila kube lula, wenze isinyathelo esikhulu phambili yena. Ungalahli ithemba nasezimweni ezinzima, bayohlala kudingeka baqinisekise ukuthi uba namandla, eduze futhi bazimisele kakhudlwana. Sinqobe izithiyo, isikhathi ngasinye kokushintsha, ukushintsha umbono wabo wonke, ushintsha izwe libe yindawo engcono. Ngikufisela inhlahla!
Ngingaba ukusebenzisa zonke izinsuku ukuze ngehlise umzimba?
Biathlete Magdalena Forsberg: Biography, izimpumelelo kwezemidlalo, empilweni yakho
SCS (carbine) Ukucaciswa. SKS carbine: isithombe
Ukushushuluza Proper - isihluthulelo ukuntula ukulimala
Ilya Nikulin - Russian hockey team ezivela emhlabeni wonke
Kanjani trifors: izindlela 4
15 Septhemba. Amaholide, izimpawu, imicimbi
Kuyini lwesinaphi? lwesinaphi izinhlobo
Indlela yokwenza isongo lesimfashini ngokwakho: isigaba samakhono
Mahhala traffic "Yandex.Disk" kubo bonke
Hamba Ikhamera - into edingekayo ukuze imoto yakho
80s zezinwele (isithombe)
Uyini umbuthano njengoba sibalo Jomethri: izakhiwo eziyisisekelo futhi izici
EKursk Nightingale. Nightingale - ayizisebenzi. Nightingale - Songbird